Hoyga - Forex Lens
Raadi ganacsigaaga 'EDGE'.
Daawo, Baro, iyo DAKHLIGA wada
bulshadayada ganacsiga ku dhex leh
Qolka ganacsiga Forex & server Discord
PRICINGKHATAR KU BIIR (BILAASH)
Ku soo biir qolkeena ganacsiga ee aan la tartamin
halkaas oo aan maalin walba si toos ah uga soconno
si aan kuu soo bandhigno falanqaynta suuqa oo toos ah
& fikradaha ganacsiga inta lagu jiro New York
& iyo/ama fadhiyada London.
KHUDBADA KU BIIRaad u bilowdo
FIKRADAHA MAALINTA GANACSIGA
Gain TOOS AH marin ka badan 4 falanqeeyayaasha farsamada maalin kasta su'aalaha iyo jawaabaha, jawaab celin ku saabsan
fikradahaaga ganacsi, & digniinta loogu talagalay dejinta ganacsiga itimaalka sare
si aad uga raadsato suuqa Forex & Crypto.
Kaliya Qaxwo Maalintii! Ka bilow Maanta Maanta
U hel marin maktabad waxbarasho oo ka badan 100 saacadood oo fiidyowyo ah.
Waxaan baraynaa istiraatiijiyado ganacsi oo adag si aan ganacsatada u siino DHALINTA dhabta ah ee ka ganacsiga suuqyada.
Qiimaynta xubinnimadaNagala soo qaybgal Discord
Ishaada Suuqyada. Raadi ganacsigaaga ganacsiga 'Forex'.
U fiirso, Baro, iyo PROFIT oo ay la socdaan beesheena ganacsiga ku jirta gudaha qolka ganacsiga ee Forex Portal iyo Discord server
Ku soo biir qolkeena ganacsiga ee aan la tartami karin ee ah halka aan si toos ah LIVE ugu soo dejino dhowr jeer maalintii adiga oo ku siinaya falanqaynta suuqa tooska ah iyo fikradaha ganacsiga inta lagu jiro kal-fadhiyada New York iyo London
Ku hel marin toos ah in ka badan 4 falanqeeyayaasha farsamada maalin kasta ee Q & A, ra'yi ka dhiibashada fikradahaaga ganacsi, iyo digniino loogu talagalay dejinta ganacsiga suurtagalnimada sare si loo raadiyo suuqa Forex iyo Crypto.
U hel marin maktabad waxbarasho oo ka badan 100 saacadood oo fiidyowyo ah. Waxaan barnaa istiraatiijiyad ganacsi oo adag oo run ahaantii shaqeysa oo ganacsatada siisa '' REAL EDGE '' oo suuqyada looga ganacsado
Beel Ganacsi Dhab Ah
Ganacsato waaweyn ayaa halkan ka ganacsada, iyo cidda aad arrimaha kala ganacsanaysaan
Ku biir bulshada ganacsatada dhabta ah oo ku xeeran shirkad wanaagsan. Diiradayada ugu weyn ayaa ah inaan kaa caawino inaad horumariso, oo aad xirfadaada gaarsiiso heerka xiga si aad u noqoto ganacsade ka wanaagsan oo faa'iido badan.
Toosinta Tooska ah ee Maalinlaha ah & Falanqaynta Suuqa
Falanqaynta suuqa tooska ah & Kulamada Su'aalaha iyo Jawaabaha ee lala yeesho falanqeeyayaasha farsamadayada
Waxaan si toos ah u daadinaa maalin kasta inta lagu guda jiro kalfadhiga New York iyo/ama London, anagoo ku siineyna falanqaynta suuqa tooska ah ee suuqyada sarifka iyo Crypto. Xubnuhu waxay weydiin karaan su'aalo waxayna codsan karaan falanqayn inta lagu jiro kalfadhiyadan.
Fikrado Ganacsi oo Faa'iido leh & Goobaha
Ku xaqiiji falanqayntaada fikradahaaga ganacsiga iyo falanqayntayada
Falanqeeyayaashayada sare waxay soo dhejiyaan fikrado ganacsi oo macquul ah iyagoo isticmaalaya habab la xaqiijiyay si ay kaaga caawiyaan xaqiijinta eexdaada jihada iyo in la aqoonsado oo laga faa'iidaysto fursadaha faa'iidada suuqyada.
Codsiga habaynta ganacsiga ee AUDNZD ee xubin ka tirsan ayaa gaadhay…
Ha ka iibsan dhuubka BTCUSD weli! Waxaa jira dood badan…
Waxaan caddaynay faa'iidada BTC ee suuqa orsada waa la gaari karaa! Waxaan leenahay…
Xeeladaha maalinlaha ah ee ganacsiga ayaa diiradda la saaray maanta, waxaana soo bandhignay labadaba…
Farsamooyinka ganacsiga hay'aduhu waxay ahaayeen diiradda fadhiga maanta.…
Dhammaan xeeladaha lacagta ee lammaane dollar waa la gaaray! DXY…
Aaladaha muhiimka ah ee Smart Money ayaa lagu daboolay New York maanta…
Iibkayaga BTC wuxuu shaqeeyaa inta lagu jiro fadhiga tooska ah marka wakhtiga gaaban
Xeeladahayada rogaal celiska ah ayaa si rasmi ah u dhaqan galay shaley…
Waa maxay sirta ganacsi ee GMT? Waxay la xiriirtaa waqtiga, haa,…
Istaraatijiyadaha lacagta maanta waxaa saameeya Guddoomiyaha Federaalka…
Maxaa Qorshahaaga Ku Jira
Waxaan ku bari doonaa sida aad u awooddo
U qaad ganacsigaaga heerka xiga
Baro maanta sida loo noqdo ganacsade faa'iido badan
U qaad xirfadahaaga ganacsiga heer cusub. Bal fiiri…
Haddii bad siman waligeed samayn badmaax xirfad leh, ka dibna suuq siman…
Haddii Fikirku soo jiito waxa lagu hagaayo, markaa waxaan leenahay…
Sida weyn Alan Watts mar yiri:
Tani waa sirta dhabta ah…
“Ma qiimeyn karo Forex Lens sare ku filan! Adeeg aad u fiican, had iyo jeer waa halkaa haddii aad wax su'aalo ah qabtid oo aad hesho talobixin khibrad leh! Falanqaynta weyn ee suuqyada! Xaqiiqdii aqoon aad u badan ayaa leh ka dib caawinta iyo talada. Waxaan kugula talin lahaa qofkasta oo raba inuu kasbado aqoon dheeri ah oo ganacsade ka noqoshada ganacsiga. ”(2021)
Jay H.Xubin Ganacsade Pro
”Mahadsanid Ganacsadaha Machadka. Waxaad tahay ganacsade kii ugu fiicnaa ee aan abid la kulmo, maahan oo keliya khibraddaada laakiin u heellanaanta ardaydaada. (2020)
Shirwan S.Xubin Ganacsade Pro
“Waxaan kharash gareeyay kumanaan doolar malaha, sanadkii la soo dhaafay waxaan raadinayay adeeg bixiye signaal wanaagsan. Way fiicantahay in la helo noocyo badan oo lammaane ah oo laga yaabo inaanan eegin waqti la siiyay, waana wax fiican markasta, markaan ku jiro ganacsiga saxda ah ee mid ka mid ah calaamadaha ganacsiga. Nooca ayaa xaqiijinaya waxa aan ka fikirayo. ”(2017)
Jeff W.Xubin Ganacsade Pro
" Jeclaanshaha waayo-aragnimada iyo sida ay wax walba u hufan yihiin. Isku darka hibada iyo wadaaga aqoonta. Si fiican loo xakameeyo. Sida shaqada oo kale. Sii wad ragga! ”(2020)
Kaushal G.Xubin Ganacsade Pro
"Waxay mudan tahay dinaar kasta. Aad baan ugu cusubahay ganacsiga markii aan ku biiray qolkooda ganacsiga. Waxaan sidoo kale u isticmaalaa istaraatiijiyadda waxqabadka qiimaha ee crypto waana darn waxtar leh. Waxaan aad ugu talinayaa Forex Lens qof kasta oo hadda bilaabaya ganacsiga. Waxay u egtahay inay sidoo kale leeyihiin waxyaabo badan oo horumarsan hadda iyo ganacsato badan oo wanaagsan oo khilaaf ka dhex jira taas oo weyn. Wax badan oo ka mid ah guushayda ayaan u tiiriyaa iyaga! ”(2020)
Doris BXubin Ganacsade Pro
Baro sida looga ganacsado Forex A ilaa Z
Waxbarashada Ganacsiga ee Forex
Sida loo isticmaalo Calaamadaha Forex Habka saxda ah
March 18, 2020/waxaa qoray Op Ed
Helitaanka Xaq Bixiye Xaq u leh In Ay Dilaan Ganacsiyada
Helitaanka Maskaxda Ganacsi
Dhisida Aasaas loogu talagalay Ganacsiga Maalintii
Sida loo galo Ganacsiga Maalintii
February 3, 2020/waxaa qoray Op Ed
Falanqeeyaha Farsamada ee Jeebkaaga
Ka faa'iideyso khibradaha falanqeeyayaasha farsamada oo si dhakhso leh ula soco barashadaada. Waxaan ku tusineynaa sida aad u abuuri karto ilo dakhli oo joogto ah iyada oo loo marayo ganacsiga Forex oo leh xeelado ganacsi iyo maareyn halista ah.
Waqti ku badbaadi jaantusyada!
Badbaadso saacado aan tiro lahayn oo falanqeeya jaantusyada ugaarsiga loogu talagalay dejinta xirfadaha wanaagsan. Waxaan kuu aragnaa fikrado ganacsi oo faa'iido leh si aad u falanqeyso. Waqtigaaga dib u hel. Xorriyadda dhaqaale waa mid weyn, laakiin waqtiga xorriyadda waa wax walba.
Fikrado Ganacsi oo Dheeraad ah - iyo Wax Yar!
Helitaanka 1 kaliya maaha, laakiin falanqeeyayaal farsamo oo badan oo wata xeelado ganacsi oo kala duwan (sida Smart Money) si ay kaaga caawiyaan ganacsigaaga - iyo wax ka yar!
Wada daawada, Baro & Faa'iidada wada
Burburka falanqaynta suuqa oo buuxa, fikradaha ganacsiga, oo leh fadhiyo Q&A ah - maalinle ah! Baro sida loo horumariyo cidhifka dhabta ah ee ganacsiga hababka aan wax ku barino. Waxaad noqon doontaa ganacsade edab badan oo sifiican uxiran marka aad noqotid Ganacsade Pro!
Wax ka baro jawiga aan khatarta lahayn
Ku billow demo ganacsi jawiga ganacsiga aan halista lahayn inta aad baraneyso. Waad xoojin kartaa xirfadahaaga ganacsi adigoon walwal ka qabin inaad lumiso lacag dhab ah. Ganacsi waa xirfada nolosha kaa bixin karta.
Kooxda Taageerada Macaamiisha ee ugufiican
La hadal kooxdayada wakhti kasta Jeexdin ama email noogu soo dir su'aalahaaga, jawaab celintaada iyo welwelkaaga [emailka waa la ilaaliyay]. Waxaan had iyo jeer halkan u joognaa inaan kaa caawinno safarkaaga ganacsiga.
Ka hel e-mayl maalinle ah waxa aan ku aragno suuqa Forex
Ganacsi Wanaagsan + Bar Shumaca Guddaha
Codsiga Dejinta Ganacsiga Hits TP1 + DXY Rally wuu socdaa
Wali Ha Iibsan Dip-ka + DXY Iibso Moodooyinka La Shaqeeyay
Faa'iidada BTC ee Suuqa Beerka + EURUSD, USOIL, Faa'iidada Dahabka
Xeeladaha Ganacsiga Maalinta + Faa'iidooyinka Dahabka Joogta ah
Farsamooyinka Ganacsiga Hay'adaha + NZDUSD Bartilmaameedyada Furan
Xeeladaha Lacagta La Gaaray + BTCUSD & bartilmaameedyada USOIL oo la garaacay
Fikradaha Lacagta Casriga ah + Xeeladda Dahabka
BTC Iibso Dhaqdhaqaaqa + Muuqaalka Suuqa Toddobaadka soo socda
Xeeladaha Dib-u-noqoshada ee Saamaynta + Iskudheellitir la'aanta BTCUSD
Siraha Ganacsiga Oo La Soo Bandhigay + Dahab & USOIL Bartilmaameedyadii La Gaaray
Xeeladaha Lacagta + Crypto Bears wali waa sii yaraanaya
Page 1 of 199123>»